We demand the JUSTICE for victims « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » We demand the JUSTICE for victims
We demand the JUSTICE for victims
တာမွေ၊ပုဏ္ဏားကုန်း၊ ၁၃၃ လမ်း နှင့် လမ်း ၁၄၀ ကြား၌ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့က မူဆလင်ကုလားများမှ ဝိုင်းဝန်းရိုက်ခြင်း ခံရသူနှစ်ဦးအနက်မှ တစ်ဦး ဦးခေါင်းခွံကွဲအက်၍ အခြေအနေမကောင်း, အခင်းဖြစ်အရပ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာလူနည်းစုနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူများစုတို့
စုရုံးနေထိုင်ရာ အရပ်ဖြစ်သည့်အလျှောက်”အလ္လာ တက္ကပဲ” ဟူသော အော်သံများထွက်ပေါ်လာပြီး ၎င်းလမ်းဆုံထောင့် ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦး ရောင်းချနေသော ကွမ်းယာဆိုင်မှ ထုတ်ပေးသည့် တုတ်၊ ဓါး၊ သံချွန်လက်နက်များဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူများစုမှ ကျော်စိုးဝင်းနှင့် စိုးမင်းဦးတို့အား ၀ိုင်းဝန်း ထိုးခုတ်၊ ရိုက်နှက်ကြရာ ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ ဒါဏ်ရာအပြင်းထန်ရ၍ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ အတွင်းလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ကုသမှု ခံယူနေရပါသည်။ ဦးခေါင်းအား ထိခိုက်မိသူမှာ စိုးမင်းဦး ဖြစ်ပြီး ဦးခေါင်းခွံအက်ပြီး ခေါင်း၌ သွေးခဲနေ၍ အခြေနေမကောင်းဟု သိရသည်။ မျက်လုံးထိ၍ ဓါးခုတ်ခံရသူ အမည်မှာ ကျော်စိုးဝင်း ဖြစ်သည်။
ထို ယာဉ်တိုက်မှုအတွက် ချယ်ရီအမျိုးအစား ယာဉ်မောင်းသူ ကျော်စိုးဝင်းနှင့်စိုးမင်းဦးတို့မှ အတိုက်ခံရသော မော်တော်ယာဉ်ကို တာဝန်ယူ ပြင်ဆင်ပေးမည့်အကြောင်း ညှို့နှိုင်းပြောဆိုသော်လည်း တစ်ဖက်ကားပိုင်ရှင်များမှာ မကျေနပ်နိုင်ပဲ အချီအချဖြစ်နေစဉ်”အလ္လာ တက္ကပဲ” ဟူသော အော်သံများထွက်ပေါ်လာပြီး ၎င်းလမ်းဆုံထောင့် ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦး ရောင်းချနေသော ကွမ်းယာဆိုင်မှ ထုတ်ပေးသည့် တုတ်၊ ဓါး၊ သံချွန်လက်နက်များဖြင့် ကျော်စိုးဝင်းနှင့် စိုးမင်းဦးတို့အား ၀ိုင်းဝန်း ထိုးခုတ်၊ ရိုက်နှက်ကြရာ ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ ဒါဏ်ရာအပြင်းထန်ရ၍ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ အတွင်းလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ကုသမှု ခံယူနေရပါသည်။
Source: သမ္မတရုံးမှ လျှို့ဝှက်သတင်းများ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=179363732255262&set=a.165471540311148.1073741828.141704712687831&type=1&theater
Tags: 1990 election, Aung San Suu Kyi said "The Results of the 1990 General Elections Must Be Implemented", BDC, burma democracy burma democracy movements, Burma Today Burmese Regime 2010 Election NCUB NLD (LA) Myanmar Myint Soe, Keywords burmatoday burmese news burmanet aung san suu kyi berma bagan khit pyaing irrawaddy dvb no burmese dvb burmese news mizzima burmese the irrawaddy irrawady aung san suu burmese genocide buy bu
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 01/11/2013 .
← HATE CRIME? မလေးရှားမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မြန်မာလင်မယား ဓားခုတ်ခံရမှု အဓိကတရားခံ မွတ်ဆလင် အမျိုးသား ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ	Burma: Demanding JUSTCIE for Arakan Women. →